Keep It Constitutional | UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika - Keep It Constitutional
“UMthethosisekelo wethu ungumqulu obaluleke kakhulu ezweni lethu. Usinika amalungelo kanye nezibopho okusifanele njengezakhamuzi zaseNingizimu Afrika.” – Childlinesa.org.za.
UMthethosisekelo ungumthetho omkhulu kunayo yonke ekhona. Lokhu kusho ukuthi umthetho “ophezulu” futhi nayo yonke imithetho eNingizimu Afrika, kanye nezenzo zikaHulumeni, kumele kube ngaphansi kwezinto ezibekiwe kuMthethosisekelo. UMthethosisekelo awuhlinzeki kuphela isisekelo somthetho, uphinde uveze amalungelo wonke umuntu ohlala eNingizimu Afrika angawafuna futhi uchaza ukwakhiwa kukahulumeni.
Ukwamukelwa koMthethosivivinywa waseNingizimu Afrika ngonyaka ka-1996 kwaba yingxenye abaluleke kakhulu emlandweni wezwe lethu. Kwakungezinye zeziqephu zokugcina zaseNingizimu Afrika zomzabalazo woBandlululo kanye nekukholonaza futhi nokulwela inkululeko, kanye nokuqalwa kwisiqephu esisha endabeni yezwe lethu.
Emuva komzabalazo omude wenkululeko kanye nokulingana, abamele zonke izinhlanga, abasuka kuzo zonke izinhlangano zepolitiki kanye nezenkululeko zezwe, bahlangana ukuthi basebenze ndawonye ukubhala uMthethosisekelo wethu. Kwathatha okungenani iminyaka emibili nesigamu ukuwenza bese waqedwa mhla ziyi-8 ku-Meyi ka-1996.
Umongameli uNelson Mandela usayine uhlaka lokugcina loMthethosisekelo ukuthi ube umthetho mhla ziyi-10 ku-Disemba ka-1996.
Emuva kohambo olude, uMthethosisekelo wethu waqedwa ekugcineni. Uthathwa njengomunye wemithethosisekelo oyisibonelo wesimanje emhlabeni. Lokho kuhle angithi?
UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika usho izinto eziningi, konke kususelwa ezimisweni ezibalulekile iNingizimu Afrika eyakhelwe phezu kwazo – isithunzi, ukulingana kanye nenkululeko. Zonke lezi zinto zithinta wena kanye nezwe lethu, kodwa kunengxenye ezibaluleke kakhulu ukuthi iNingizimu Afrika izazi – okubalwa nawe! Izingxenye ezibaluleke kakhulu zoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uMqulu wamaLungelo Abantu, otholakala Esiqeshini Sesibili soMthethosisekelo.
Umqulu wamaLungelo Abantu uwuhla lwamalungelo eyisisekelo wonke umuntu eNingizimu Afrika anawo. Ezweni lenkululeko njengeNingizimu Afrika, amalungelo akho akunika inkululeko kanye nokuphepha okuningi okuvumela ukuthi uphathwe ngendlela enobulungiswa futhi ngokulingana noma ngabe ungubani. Izingane kanye nezingane ezikhulile zinamalungelo athile– amalungelo adinga ukuthi ahlonishwe yiwo wonke umuntu ezweni.
Uyini uMthethosisekelo? Uma ungagugula la magama ‘Uyini uMthethosivivinywa?’, kungenzeka uthole umphumela osho into ecishe ithi, […]